ती दिनहरु हाम्रो संस्कार, राम्रो संस्कार – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
ती दिनहरु हाम्रो संस्कार, राम्रो संस्कार
२०७७ पुष २५, शनिबार ०९:२९ गते
रातिको १२ः०० बजेको रहेछ । मनमा विभिन्न विचार तरङ्गहरु आए । केहीछिन त्यसै ब्ल्याङ्केटको न्यानोभित्र मौन बेहलचल पल्टिरहेँ, तर मन छटपटिइरह्यो । ‘संस्कृति कति निर्दोष मातृत्व हो है’ जस्तो लागिरह्यो । निश्चित अनुहार दिएर धरतीले मान्छेलाई जन्माउँछ । निश्चित अनुहार र सक्कल सिर्जना गरिदिने भूगोलको निश्चित संस्कृति दिएर हुर्काउँछ पनि । कति गौरव लाग्दो छ, विषय ।
केही लेख्न मन लाग्यो, लेख्दै छु । हाम्रो मौलिक संस्कृति छ । यसले बिस्तारै कृत्रिम अनुहार फेर्दै छ जस्तो लाग्छ । अवश्य पनि नयाँ चित्र अनुहार र नयाँ आविष्कार सबैका निम्ति रमझमपूर्ण र रमाइलै हुन्छ होला । ठाउँविशेष जान्ने चाहनाले सयौँ वर्षअगाडि कोलम्बस नाम गरेको एउटा उत्साही नाविकको मनमा संसारको अर्को कुनामा रहेको अज्ञात स्थल थाहा पाउने इच्छा जन्मियो ।
यात्रा निष्पट्ट अज्ञात थियो तर त्यत्तिकै अदम्य उत्साह पनि उसभित्र मौलाएको थियो । आज हामी उही अज्ञात यात्रामा निस्किएको उत्साही यात्रु कोलम्बसजस्तै नयाँ विषय, परिवेश र संस्कृति जान्नेबुझ्ने इच्छाले जुर्मुराएका छौँ होला पनि । यो मानवीय स्वभाव हो… स्वागतम्, तर संस्कृति बिलकुल नै पृथक् विषय हो ।
‘संस्कृतिको बीज’ मासियो भने भोलि फेरि नयाँ बिरूवा धरतीले उब्जाउन सक्दैन । मेरो नजिकै ठूलो फाँटमा फैलिएको नारायणी नदीसँग जोडिएर रहेको दिव्यनगरको भूगोलले धेरै धान अन्न उब्जाउँछ । यही भूगोलको आँगनीले वर्षैपिच्छे हजारौँ साइबेरियाली चरा (क¥याङ्कुरूङ)लाई स्वचालित स्वयमेव यहाँ बोलाउँछ ।
कजलवायु परिवर्तनले होला, बिस्तारै यहाँको भूगोलले आफ्नै आँगनीमा यी पक्षीलाई प्रकृतिगत आवश्यक सामग्रीहरु पु¥याउन सकेको छैन, सायद । ती पक्षीको आगमन मन्द हुँदै छ । के थाहा, कुनै दिन यो आलेख लेख्दै गरेको यस लेखकको यो सन्दर्भ कथा पो बनिदिने हो कि ?
‘सेता चरा, लामा घाँटी, अग्लाअग्ला आकार र समूह । पङ्क्तिबद्ध आकासमा लस्करै उड्ने पक्षी जाति । भोलिको दिनमा कथामात्रै पो हुने हुन् कि !
मान्छेहरु नदीस्नानका लागि निस्किएका थिए । त्यसदिन खण्डग्रास सूर्यग्रहण थियो । प्रातः ८ः४९ देखि ११ः३१ सम्म रह्यो होला, सम्भवतः । भजनकीर्तन, प्रभुचिन्तन । ध्यानसाधना । शुद्ध आचरण । हाम्रो संस्कृति अहा !!
मैले लेखेको छु । मान्छेले ईश्वरको सृष्टि गर्छ । आफूले सृष्टि गरेको ईश्वर आफ्नै निम्ति वरदान र फलदायी हुन्छ । ऊ हरहमेसा आफ्नैलागि रक्षक हुन्छ । शीतल छहारी र कल्पवृक्ष हुन्छ । संस्कृतिले कल्पवृक्ष भएर जिन्दगीको भरणपोषण गर्दछ । कसैको पनि कुभलो र अकल्याण गर्दैन ।
कतै पानी बर्सेन, खडेरी प¥यो र सर्वत्र हाहाकारको आभास भयो भने हाम्रो संस्कृतिले ईश्वरको प्रार्थना गर्दछ । कुनै सार्वजनिक स्थानमा सामूहिक भेला भएर अस्तित्वसित गुहार माग्छ । अस्तित्वको अर्थ हुन्छ, प्रकृति । प्रकृति समूल ब्रह्माण्ड र सिङ्गो स्वरुप हो । प्रकृति स्वचालित छ । स्वचालित प्रकृति ईश्वरको प्रत्यक्ष अनुहार हो । ऊ प्रत्यक्ष छ तर हरेक मानिसको प्रेमिल हृदयमा उसको सृष्टि हुन्छ । ईश्वरको सृष्टि प्रेमको उद्गम हो । प्रेम आराधना हो । निःसङ्कोच प्रार्थना र उत्सव हो ।
नेपालको काठमाडौँ उपत्यकामा ज्यापू जातिले सुखद र उर्वर वर्षा ऋतु आगमनको प्रतीक्षामा भ्यागुताको पूजा गर्छ । उसको यो संस्कृति समृद्ध छ । प्रकृतिमैत्री छ । ज्यापू जाति निरन्तर स्वस्थकर प्रकृतिको कामना गर्दछ ।
म लेख्दै छु । संस्कृति प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ । संस्कृति व्यक्तिको मनस्थितिबाट बिच्किएर अन्यत्र लाग्दा अनिष्ट हुन्छ । मेरो संस्कृतिले नदी, खोला, इनार, धारो, बुटबुट्यानलाई सम्मान गर्छ । प्रार्थना र पूजाअर्चना गर्दछ । यो ईश्वर प्रार्थना हो । दिव्यनगरको खेतबारीमा साइबेरियन पक्षीले स्वतःस्फूर्तरुपले जाडो याममा हजारौँ माइल उडेर आउनैपर्छ । यो ईश्वरको विधान हो ।
म अध्यापक रहेको कालिका आवासीय माविको प्राङ्गणमा विशाल बरपीपलका वृक्षहरु हुर्किएका छन् । छिमेकी दिदीबहिनीहरु प्रत्येक शनिबार पूजाप्रार्थना गर्नुहुन्छ । बोटको जरामा जलसिञ्चन गर्नुहुन्छ र काँचो सुती धागोेले युगल बोटलाई रक्षाकवच पहि¥याउनुहुन्छ । यसमा मेरो नजरले अथाह सुखानुभूति गर्दछ । मैले आज शब्दमा मेरो अनुभूति उतारेको छु ।
उसको संस्कृति अवश्य उसैका लागि प्रिय छ, तर मेरो संस्कृति मेरोनिम्ति मेरो प्राण भएर मेरो खुन र नसामा बग्दछ । मेरो संस्कृति रुढिवाद होइन । यो प्रकृतिवाद हो । यसले सकल संसारको स्वचालित न्यायको वकालत गर्दछ । अज्ञानतावश धर्मको नाउँमा कसैको घाँटी रेट्ने महिला, छोरीचेलीलाई महिनावारी धर्मचक्रका समयमा छाप्रातिर बस्न बाध्य गराउने, मानवजातिका बीचमा जन्मजात उँचनीच देख्ने कुसंस्कार नासिनुपर्दछ, तर वर्षभरि मनाइने हाम्रा एक—एक चाडपर्व र संस्कृति विशेष छन् । कसैको संस्कृतिले कसैको उन्माद र बहकावमा लागेर मर्न नपरोस् । सबै संस्कृति जीवन्त रहून् । ज्यापू जाति भ्यागुता सम्झियोस् । हरेक वर्ष वर्षा ऋतु आओस्, दसैँतिहार आऊन् । दुःखमा बस्नुपर्दा शरीरमा सेतो कपडा, धोती, लँगौटी र पराले चकटी होऊ्न । मुडुलो शिर, चोखोनीति र नियमभावले पितृमोक्ष हुन्छन् भन्ने अचलनीति, नियम निरन्तर होस् । गरूड पुराणको समयसापेक्ष व्याख्या र चर्चा होस् । जेजस्ता हाम्रा आस्था र संस्कृतिका धरोहर छन्, ती निरन्तर होऊन् । ‘ओम् भुर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम् । भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।’
हाम्रा पूर्वजहरुले दैनिक प्रातःस्नानपश्चात् जप्ने गायत्री मन्त्र हो, तर नबुझी जप्दा यसको सही अर्थबोध हुन नसक्ने र जप्नुको सार्थकता सिद्ध नहुने हुँदा जीवनशैली परिवर्तनमा समेत सकारात्मक प्रभाव नपर्न सक्छ । नेपालीमा यसको अर्थ यसरी लगाउन सकिन्छ ः ‘मेरा प्राणस्वरुप हे परमेश्वर ! तपाईंले मेरा दुःख हरण गर्नुस्, सुख प्रदान गर्नुस् । श्रेष्ठ जीवनका निर्माता तपाईंले मलाई तेज बुद्धि प्रदान गरी जानेर अथवा नजानेर भएका मेरा पापहरु नाश गर्नुस् । यस्ता सम्पूर्ण समस्याका समाधान एकमात्र तपाईं परमेश्वरलाई म अन्तस्करणमा धारण गर्दछु । यस्ता तपाईं परमेश्वरले मेरो बुद्धि र विवेकलाई सत्मार्गतर्फ प्रेरित गरिरहनुहोस् ।’
अतः उल्लेखित गायत्री मन्त्र बुझेर ध्यान गर्न सकियो भने हाम्रा अनेक समस्या स्वाभाविकतः दूर भएर जाने कुरामा कुनै शङ्का छैन । ‘जानेर वा नजानेर भएका पापहरु’ भन्ने सन्दर्भको अर्थ रियलाइजेसन गर्नु हो, अर्थात् महसुस गर्नु हो । अज्ञानकालीन जीवनका दिनहरुमा गरिएका कुकर्महरुको दहन गर्न विभिन्न यज्ञ, दान, धर्म आदि आवश्यक रहन्छन् भनिएता पनि तत्कालीन वैदिक सभ्यतामा रियलाइजेसनको कुरा अहम् थियो ।
ठूला–ठूला यज्ञकर्महरुमा धेरै सङ्ख्याको उपस्थितिमा आफूबाट भएका कमीकमजोरीहरु प्रस्ट अभिव्यक्त गरी जीवन हलुका गर्ने उसबेलाको सभ्यता उँचो थियो । सायद विडम्बना भन्नुपर्दछ, पछिल्लो कालखण्डमा यज्ञ, दान, धर्मजस्ता कार्यहरु धनीमानी मान्छेहरुले आफ्नो शान, सौकात र अहंकार दर्शाउनका लागि गर्नेजस्तो असभ्यताका रुपमा विकसित हुँदै गए ।
तर, सभ्यताले पुनः आफ्नो मौलिक अवस्था फिर्ता लिने कुरा विश्व इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ । त्यससमयको यज्ञ आदिलाई एउटा ठूलो उत्सव र पर्वको रुपमा लिइन्थ्यो, जहाँबाट जीवन सञ्चालन गर्ने ऊर्जा र नैतिक शिक्षा एवम् समाज हाँक्ने महानतम आदर्श व्यक्तिविशेषका सल्लाह, निर्देशन श्रवण गरिनुका साथै त्यस्ता जीवनोपयोगी आदर्श भनाइहरुलाई जीवनका हरकदमहरुमा उपयोग गरिन्थ्यो । ईश्वरप्रतिको आस्था भन्नु पूरै पृथिवी, धरातल र विश्व ब्रह्माण्डको समर्पण थियो । अझै पनि अवशेषको रुपमा ज्ञानीजनहरु सूर्य, पृथिवी, बोट, बिरूवा, नदी र प्राणीविशेषको पूजा—आराधना गर्दैछन् ।
यस पंक्तिकार केही यस्ता अनुयायीहरुले अझै पनि नदीको किनारमा उभिई दुई हात जोडी नमस्कार गरेको देख्दा हर्षले विभोर हुनेमात्रै होइन, आफ्ना पूर्वजहरुको समृद्ध संस्कृतिसँग अद्भुत अनुभूति गर्दछ । आज नदीहरुको अवस्था हाम्रा पूर्वजहरुले पूजा गर्नयोग्य भएजस्तै छैन ।
मैले जान्दासम्म माघे सङ्क्रान्ति स्नान गर्न चितवनको देवघाट जाने मान्छेहरुको जति संख्या हुन्थ्यो, त्यो सम्भवतः नदी दूषित हुनकै कारणबाट वर्षैपिच्छे घट्दै छ, तर फेरि पनि केही चेतनशील मानिसहरुमा नदी सफा गर्नुपर्ने विषयमा एक किसिमको जागरूकता आएको देख्न पनि थालिएको छ । आशा गर्न सकिन्छ कि निकट भविष्यमै सबैमा आउने दिव्य चेतनाको फलस्वरुप हाम्रा पूर्वजहरुको विरासतले अवश्य नै भरपूर सम्मान प्राप्त गर्ने छ ।
सामाजिक समृद्धिका लागि गरिएको वैदिककालीन कार्य विभाजनमा आज गरिएको जातपातको विभेदसम्बन्धमा हिन्दुधर्मको मूलग्रन्थमा यसरी व्याख्या–परिभाषा गरिएको छ :
ब्राह्मणस्य मुखमासिद्बाहू राजन्यकृतः।
उरूतदस्य यद्वैश्य पद्भ्यामशुद्र अजायतः।
वैदिककालीन सभ्यतामा एक सबल समाज, देश र सबल मानिस बन्नका निमित्त चार किसिमका कार्यप्रणालीलाई जोड गरिएको छ ।
दर्शन, साहित्य, नीतिनियम र व्यवस्थापनका परिचालक र परिपालकलाई ब्राह्मण भनी सम्बोधन गरिएको छ । ब्राह्मणले सल्लाह, सुझाव र नीति आदिका कार्यक्षेत्रविशेषसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले उनीहरु पूर्ण मानिसको चित्रण व्याख्याअन्तर्गत शरीरको प्रमुख अङ्गसँग तुलना गरिए ।
समाजभित्रको रक्षा अवस्था ठीकठाक गर्न, शान्ति अमनचयन र लडन्त, भीडन्त आदि कार्यमा बल, तागत र युद्धकला अपरिहार्य भयो । अतः उनै क्षेत्रीय शरीरको हात अङ्गका रुपमा तुलना गरिए ।
समाजको आर्थिक, वाणिज्य र समृद्धिको क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसायले स्वाभाविकरुपमा समष्टि अर्थ राख्ने भएकाले व्यापार, व्यवसाय गर्ने कला भएकाहरुलाई वैश्य मानी शरीरको पेट, जाँघ अङ्गसँग तुलना गरियो, जसले पूरै समाजको श्रीविकासको कार्य गर्दथ्यो ।
उद्योग, कलकारखाना निर्माण तथा हातहतियार र उत्पादन क्षेत्र ज्यादै ठूलो र अर्थपूर्ण अङ्ग भएको सन्दर्भमा सबल समाज र व्यक्ति भएर उभिन केही कुशल वर्ग आवश्यक भएको ठहर गरी सो वर्ग कालिगढ, शूद्र अथवा दरो र दृढताका साथ भर गरी टेक्न शरीरको पाउ अष्ले सम्बोधन गरियो, तर पछिल्ला दिनहरुमा अर्थको अनर्थ लाग्न गई ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्रलाई जन्मजात कुलघरान, कथित उँच र नीच जातविशेषमा तुलना गर्ने कार्य भएबाट सम्पूर्ण समाज अन्धकारले छटपटियो । मानिस–मानिसमा विभेदकारी दरार तयार गरियो । अब चेतनाको दीप जागृत भइरहेको वर्तमान पिँढीले यो दरारलाई समयसापेक्ष मेट्दै जानुपर्दछ ।
जो हिजो भ्रमवश पछाडि प¥यो वा पछाडि पारियो, त्यसको मूल्य चुक्ता लिन बिनाशैक्षिक परिवेश सम्भव छैन । अतः सो क्षेत्र विशेष चनाखो भई यस कार्ययात्रालाई अघि बढाउन अनुरोध छ । शरीरको कुनचाहिँ अङ्गलाई कम आँकलन गर्न सकिन्छ र ? सबै अङ्गमा रहने मानवीय संवेदना पूरै शरीर र चेतना अनुुभूतिको आवश्यक अवस्था हो ।
धर्मले मानवीय मूल्यको वृद्धि गर्दछ । संस्कृतिले मान्छेको स्थान, मातृत्व र उसका पूर्वज अनि वंशज बोध गराउँछ ।
संस्कृति आआफ्ना हुन्छन् । त्यस्ता संस्कृतिहरु देश र परिवेश अनुकूल सृजित हुन्छन् । ती संसारभरकै मान्छेका निम्ति अत्यन्त प्रिय र सुन्दर हुन्छन् । मान्छेले अर्काको संस्कृतिको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो संस्कृतिलाई माहुरीले आफ्नो घार संरक्षण गरेझैँ संरक्षणको भूमिकामा रहन सक्नुपर्दछ ।
म बर्मा देशको माटोमा जन्मिएँ, त्यतै हुर्किएँ पनि । नवौँ वर्षको उमेरदेखि आजसम्म नेपाल आमाको काखमा जीवनरथ चलाउँदै छु । हाम्रो संस्कृति उमार्ने, हुर्काउने र फलाउने बर्मा म्यान्मारको माटो कति उब्जाउ होला ? छक्क पर्छु !
त्यहाँको धरतीले नेपाली संस्कृतिको खेती गर्छ । बीजबिजन वितरण गर्छ । त्यसको गोडमेल र हेरचाह गर्छ, फसल भिœयाउँछ । आपसी सहयोग, मेलमिलाप र समन्वय कति उत्कृष्ट छन् । होनहार नेपाली ब्लडहरु त्यहाँको माटोमा पोखिनुभएको छ । पराया देशमा रहेर पनि पैतृक देशको चिन्ता गर्नुभएको छ ।
यदि म गलत छैन भने भगवान् बुद्धको प्रीत र देशना नेपाली संस्कृतिसँगै पवित्र गंगा भएर त्यहाँ बहेको छ । अनन्तसम्म बहिरहोस् ।
म त व्यक्ति हुँ, सूक्ष्म इकाइ । सबैका कथा हुन्छन्, सबैका कथाहरु पुस्तकका पृष्ठजस्तै स्मृतिका रिलहरुमा लेखिन्छन् । केवल अनुभूतिलाई भौतिक शब्द साधनामा उतार्न अभ्यास जरूरी हो । जे भोग्दै छु, अनुभवको यात्राले जे सिकाएको छ, लेख्दै छु ।
हामी नेपालीहरु कहिलेकाहीँ फसल भिœयाउने बेलामा विचित्रको स्वभाव देखाउँछौँ । छिमेकी बैरीलाई चुक्ली लगाउन पुग्छौँ । हात जोड्छौँ, लम्पसार पर्छौं र युद्ध लड्दै गरेको बहादुर योद्धालाई थचक्क बसाली दिन्छौँ । खुब रमाइलो मान्छौँ । इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गराउँछौँ, मख्ख पर्छौं । यस्तो धेरैपटक भएको छ । नेतृत्व र शक्तिमा पुगेपछि केको मद्ले मथिङ्गल शून्य हुन्छ ? बुझ्नै सकिन्न । चाहे दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको मुद्दा होस् अथवा नालापानी र अन्य यस्ता धेरै स्थान ।
अहिले त्यस्तो पवित्र माटोमा पनि केही उदेकलाग्दा वैरभावले जन्मिन खोज्दैछन् । लाग्छ, कतै वैरभावको जन्म हुने हो कि ? दार्जिलिङ र गोर्खाल्यान्डको अर्कै अनुहारले हामीलाई अज्ञात भुमरीमा फेँकिदिने हो कि ?
हामी वीर छौँ, कर्मयोगी छौँ, सीधा छौँ, संस्कृतिप्रेमी छौँ तर कूटनीतिक कलामा अवश्य कमजोर छौँ । षड्यन्त्रको जालोमा सहजै अल्झिन्छौँ ।
हाम्रो इतिहासका धेरै कथाहरु वीर नेपाली र इमानदार गोरखालीमात्रै भएर लेखिएका छैनन् । ती धेरैपटक मुख र अनुहार छोपेर आँसुको पीडामा लत्पतिएका पनि छन्, आँखा ओभाउनै नसकिने गरी रोएका छन् ।
हामी नेपालीहरु बौद्ध र वैदिक संस्कृतिका दोभान अवश्य हौँ । दुवै संस्कृति हाम्रा आर्य संस्कृति हुन् । यी सबै पवित्र छन् । मोक्षदायक छन् र ग्रहणयोग्य छन् । यी दुवै संस्कृतिप्रति हाम्रो अटुट सहिष्णुभाव छ । दोभानका दुई शिरामा उभिएर अन्य वैरीहरुले हाम्रो सहिष्णुतामाथि षड्यन्त्र प्रहार नगर्लान् भन्न नसकिने भएको छ । म्यान्माका हाम्रा सचेत नेपाली ब्लडहरुले समयमै यस विषयमा विशिष्ट खोज, अनुसन्धान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्न सक्छु । हामी एउटै सिङ्गो चौतारीको शीतल छहारीमा अटाउन सक्छौँ । म्यान्माको पवित्र माटोभित्रबाट उब्जिएर संसारको समूल नेपालीलाई एकताको सूत्र सिकाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ । हाम्रो संस्कार, राम्रो संस्कार हो भन्ने कुरामा न त कुनै संशय छ, न त कुनै चिन्ता । जय संस्कार, जय संस्कृति ।